ऋतिक रोशनको आज ४५औं जन्मदिन : पूर्वपत्नीले ‘सोल मेट ’ भन्दै शुभकामना दिइन् | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
ऋतिक रोशनको आज ४५औं जन्मदिन : पूर्वपत्नीले ‘सोल मेट ’ भन्दै शुभकामना दिइन्
पुस २६, २०७५ बिहिबार १५:२२:२० | उज्यालो सहकर्मी
२०१८ का संसारकै सर्वाधिक सुन्दर अभिनेताहरुको सूचीमा पहिलो नम्बरमा पर्न सफल बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशनको आज ४५औं जन्मदिन हो ।
उनको जन्मदिनको अवसरमा सामाजिक संजालहरुमा बलिउडकर्मी तथा उनका प्रशंसकहरुले शुभकामना दिइरहेका छन् । यसैबीच ऋतिक रोेशनकी पूर्व पत्नी सुज्यान खानले पनि ऋतिकलाई जन्म दिनको शुभकामना दिएकी छिन् । विवाह गरेको १४ वर्षपछि ऋतिककी पत्नीले सन् २०१४ मा ऋतिकलाई डिभोर्स दिइकी थिइन् ।
अहिले तिनै सुज्यान खानले ऋतिकलाई सोल मेट भन्दै जन्मदिनको शुभकामना दिएपछि यी दुवैबीचको सम्बन्धको फेरि चर्चा भइरहेको छ ।
ऋतिककी पूर्वपत्नी सुज्यानले ऋतिकलाई सोलमेट भन्दै उनको इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा ऋतिकसँगका तस्बिरसहित लेखेकी छिन्, ‘संसारभरिकै मेरो मिल्ने साथीलाई जन्मदिनको शुभकामना ।’
सुज्यानले ऋतिकलाई आफ्नो मिल्ने साथी र आफ्ना २ छोराको लागि संसारकै उत्तम पिता रहेको पनि लेखेकी छिन् ।
A post shared by Sussanne Khan (@suzkr) on Jan 9, 2019 at 10:02am PST
सन २००० मा विवाह गरेका ऋतिक र सुज्यानले २०१४ मा सम्बन्ध बिच्छेद गरे पनि पछिल्लो केही वर्षदेखि फेरि यो जोडी नजिकिएको छ । ऋतिक र सुज्यान धेरै पटक आफ्ना २ छोराहरुसँग विभिन्न ठाउँमा घुम्न जाने त कहिले सुज्यान र ऋतिक एकसाथ डिनर डेटमा जाने गर्छन् ।
केही दिनअघि सार्वजनिक खबरहरुमा यो जोडीले फेरि एकअर्कासँग विवाह गर्न सक्ने पनि बताइएको थियो ।
ऋतिक र सुज्यान खानबीचको सम्बन्ध विच्छेदको कारण अभिनेता अर्जुन रामपाललाई बताइएको थियो । सुज्यान खान ऋतिककै मिल्ने साथी अर्जुन रामपालको प्रेममा परे पछि ऋतिकसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको पनि खबर सार्र्वजनिक भएका थिए ।
यी अभिनेतृहरुसँग डेट गरिसकेका छन् ऋतिकले
सन् २००० को सुपरहिट फिल्म ‘कहो ना प्यार हे’ को क्रममा अभिनेता करीना कपूर र ऋतिक रोशन एकअर्काको नजिक भएका थिए । त्यस समयमा फिल्म ‘कहो ना प्यार हे’ मा अभिनेतृको रुपमा करीना कपूरलाई साइन गर्ने चर्चा थियो ।
त्यसबेला ऋतिक र करीना एकअर्काको प्रेममा परेका थिए तर पछि अभिनेत्री अमिशा पटेललाई साइन गरियो । खबरहरुका अनुसार एकै समयमा अभिनेत्री करीना कपूर र उनकी पूर्वपत्नी सुज्यान खानसँग एकसाथ डेट गरिरहेका थिए ।
विवाहपछि पनि ऋतिकको नाम कैयाैं अभिनेतृहरुसँग जोडियो । सन् २०१० मा प्रदर्शन भएको फिल्म ‘काइट्स’ को छायांकनको क्रममा त्यसै फिल्मकी अभिनेत्री बारबरा मोरी र ऋतिक रोशन नजिकिएका थिए ।
ऋतिक र बारबराबीचको प्रेमसम्बन्धको चर्चा यति चुलियो कि यसको असर उनको वैैवाहिक जीवनमा समेत पर्‍यो । ऋतिक र सुज्यानबीच त्यसैबेला देखि खटपट सुरु भएको थियो ।
बलिउड फिल्म उद्योगमा सर्वाधिक चर्चामा आएको सम्बन्ध हो ऋतिक र कंगना रनाउत बीचको । यी दुवैबीचको प्रेम सम्बन्ध र ब्रेकअपको खबरहरु लामो समयसम्म हेडलाइन बनेरै भारतीय मिडियामा छाएका थिए ।
फिल्म ‘कृश ३’ को छायांकनको क्रममा प्रेमसम्बन्धमा रहेको यो जोडीको सम्बन्ध पनि लामो समय टिक्न सकेन । ब्रेकअपपछि कंगनाले ऋतिकलाई मिडियासँगको कुराकानी मा ‘सिल्ली एक्स’ भनेपछि ऋतिक र कंगनाबीच लफडा भएको थियो । पछि यी दुईबीचको सम्बन्ध यतिसम्म खराब भयो कि उनीहरु अदालतसम्म पुगे ।
अभिनेत्री कट्रिना केफसँग ऋतिक रोशनको नाम जोडिएको थियो । फिल्म ‘ब्याङ्ग ब्याङ्ग’ को छायांकनको क्रममा कंगना ऋतिकको प्रेममा परेकी थिइन् ।
यी दुवैबीचको प्रेमको चर्चा पनि भयो तर यी दुवैले आफूबीचको प्रेम सम्बन्धलाई असल साथीबिचको सम्बन्ध भन्दै खण्डन गरे ।
तर सुज्यानसँगको सम्बन्ध विच्छेदपछि ऋतिक र कट्रिनाले केही समयसम्म गोप्यरुपमा एकअर्कासँग समय बिताउने गरेको बताइएको थियो ।
अन्तिम अपडेट: जेठ २६, २०७६
बलात्कारको आरोपपछि फरार मन्सुरबाबु पक्राउ
सावधान ! तपाईँको फेसबुक अरु कसैले त चलाएको छैन ? समाधानकाे उपाय छ
ढुंगेललाई आम माफी नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
४२ डिग्री गर्मीमा पानीको अभाव (फोटोफिचर)
असार २, २०७६ सोमबार
यौनिकता दर्शाउने पनौती जात्रा
विश्वकप क्रिकेट : बंगलादेश र वेष्ट इण्डिजबीच प्रतिस्पर्धा, दुवै ...
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो खण्डको काम सुरु
मौसम : हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना, तापक्रम केही मात्रामा घ...
एसईईको परीक्षाफल असार दोस्रो साता सार्वजनिक हुने
लागु औषधसहित २ युवती र ४ युवक पक्राउ
डलर र सुन साट्ने भन्दै ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय
विश्वकप क्रिकेट : भारतसँग पाकिस्तान ८९ रनले पराजित
कोपा अमेरिका : इक्वेडरमाथि उरुग्वेको फराकिलो जित
पेट्राेल, डिजेल र मट्टीतेलकाे मूल्य घट्याे
फिफा महिला विश्वकप: स्विडेन अन्तिम १६ मा प्रवेश
इजरायली प्रधानमन्त्रीकी पत्नीले गरिन् सरकारी रकमको दुरुपयोग, १...
यार्सा खोज्न गएकाहरुमाथि आक्रमण हुँदा घाइते भएका दुइ जनालाई ...
शाकाहारी खानामा होटेलले हड्डीका टुक्रा मिसाएर जन्तीलाई खुवाएपछि झण्डै टुटेन विवाह
सुडानः तेल, सुन, हात्तीको दाँत र ‘काला मानिसहरुको देश’
विश्वकप क्रिकेटको 'हाई भोल्टेज गेम' : पाकिस्तानले भारतलाई किन हराउन सक्दैन !
५ बलिउड सुपरहिट अभिनेताका छाेराहरु: जाे अझै पहिचान खाेज्दैछन्
गुठीका जग्गा–जमिन र गर–गहनामाथि गिद्दे दृष्टिको दुष्परिणाम
जेठ ३१, २०७६ शुक्रबार
मेयरले नभाँच्दै भाँचिएको नाक ! कसरी जोगाउने पत्रकारको साख ?
जेठ २७, २०७६ सोमबार
इलामको छुर्पी भारतदेखि अमेरिकासम्म
त्यसैले म मलेसियामा १२ वर्ष सम्पर्कविहीन भएँ
जेठ २०, २०७६ सोमबार
लुगा सिलाएर घर खर्च पुर्‍याउँछु, श्रीमानले मलेसियामा कमाएको ...
जेठ १५, २०७६ बुधबार